Shiinaha Dog Interactive Dog Toys Xarig Toy Cuntada lagu daaweeyo Ball warshad iyo soo saarayaasha | Ihome
Ey Is-dhexgal ah oo Cunto Alaabta Xariga Waxyaabaha Lagu Ciyaarayo Ball
Tilmaamaha Tilmaamaha Waxyaabaha lagu ciyaaro Xadhigga tuugga tuuggu wuxuu ka samaysan yahay sun aan sun lahayn, caag jilicsan iyo maro cudbi ah oo dhaqi kara. Alaabta carruurtan lagu calaliyo eeyaha waxay ka caawin karaan xayawaanku inay ilkahooda shiidaan. Si loo yareeyo raaxo la'aanta ilkaha eyga! Ka caawi hagaajinta caafimaadka ilkaha eygaaga, yareynta huurada soo baxda iyo ka hortagga cudurka ciridka! Kubaddu waxay soo duubi kartaa cunnooyinka fudud eeyga oo soo dhici doona marka la duubayo, taas oo eyga ugu raaxeysan kara. Sooc Midab: Waxyaabo Midab Leh: Xarig suuf tayo sare leh + S ...
Qalabka eyga tuugta ah ee tuugta ah wuxuu ka samaysan yahay wax aan sun ahayn, caag jilicsan iyo maro cudbi ah oo dhaqi kara. Alaabta carruurtan lagu calaliyo eeyaha waxay ka caawin karaan xayawaanku inay ilkahooda shiidaan. Si loo yareeyo raaxo la'aanta ilkaha eyga! Ka caawi hagaajinta caafimaadka ilkaha eygaaga, yareynta huurada soo baxda iyo ka hortagga cudurka ciridka! Kubaddu waxay soo duubi kartaa cunnooyinka fudud eeyga oo soo dhici doona marka la duubayo, taas oo eyga ugu raaxeysan kara.
Midab: Midab leh
Waxyaabaha: Xadhig tayo sare leh oo cudbi ah + Caag jilicsan
Cabir: 46cm * 7cm (3 Xirmo xirmo)
Hore: Caruurta Ey Xarig Cuf Xanjo Maro Lafta Qaab Jiita
Ey Arooska Dharka shanley Birta Iyadu ...
Dog Donut Bed Bed Meduim Cushio ...
Ey Snuffle Mat Qufulka Quudinta ...
Meduim Hooded Raincoat Jack ...
Furaashka Ey-ada Hurdada ...